भोलि कार्तिक ११ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक ११ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि कार्तिक ११ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin October 27, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 282 Views
तपाईंको आत्मीयता अधिक संवेदनशील हुनेछ। नतिजा स्वरूप, कसैको बोली वा व्यवहारले तपाईंको मन दुख्नेछ। मानसिक डरका साथसाथै शारीरिक अस्वस्थताले पनि बेचैन रहनेछ। आमाको स्वास्थ्य बिग्रनेछ। सवारी चलाउँदा सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।
चिन्ताको बोझबाट मुक्ति महसुस गर्दै ऊर्जा र उत्साहको अनुभव गर्नुहुनेछ। भावनाको प्रवाहमा कल्पनाको संसारमा घुम्नु हुनेछ। परिवारको सदस्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आर्थिक कार्य सम्पन्न हुनेछ । मनपर्ने भोजन प्राप्त हुनेछ।
काममा सफलता मिल्न ढिलाई हुन सक्छ । आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आएपछि धेरै राह हुनेछ काम-व्यवसायमा सहकर्मीको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। घरपरिवारमा हर्षोल्लासको वातावरण रहनेछ ।
शारीरिक तथा मानसिक सुख मिल्नेछ । तपाईको दिन साथीभाइ तथा आफन्तजनसँग हर्षोल्लासका साथ बित्नेछ। तपाईको मन अधिक क्षमाशील रहनेछ। दाम्पत्य जीवनमा जीवनसाथीप्रति विशेष आकर्षणको अनुभव हुनेछ।
चिन्ताको बोझले स्वास्थ्यलाई हानि गर्नेछ। कसैसँग विवाद हुनेछ। अदालतको काममा सावधानी अपनाउनुहोला । भावनाको बहावमा नपरेर कुनै पनि विचारविहीन काम नगर्नुहोला। बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला।
व्यवसायी र जागिर गर्नेले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछन्। उच्च अधिकारी खुसी हुनुका साथै पदोन्नतिको सम्भावना बढ्नेछ। विवाहितको लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। महिला मित्रहरू लाभदायक साबित हुनेछन्।
तपाईको काम सजिलै सम्पन्न हुनेछ । मान-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। कार्यालयमा उच्च अधिकारीबाट आत्मविश्वास बढ्नेछ। व्यापारीले व्यापार र आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। घरायसीजीवन सुखमय रहनेछ। स्वास्थ्य रहनेछ।
थकान, आलस्य र चिन्ताका कारण काम गर्ने जोश कम हुनेछ। विशेष गरी बच्चाहरु तपाईका लागि चिन्ताको कारण हुनेछन्। कार्यस्थलमा पनि अधिकारीको नकारात्मक व्यवहारले तपाईमा निराशा उत्पन्न हुनेछ। व्यापारमा कठिनाइ हुनेछ।
अनिच्छनीय घटना, रोग, क्रोधले तपाईको मानसिक व्यवहारलाई निराश बनाउनेछ। सरकार विरोधी प्रवृत्ति रहनेछ। केही कारणले समयमै खाना पाईनेछैन । अत्यधिक खर्च नगर्नुहोला। झगडाबाट टाढा रहनुहोला ।
कामको बोझ र मानसिक तनावबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। साथीभाइ र आफन्तसँग खुसीसाथ दिन बित्नेछ। विपरित लिङ्गीय व्यक्तिहरुप्रति आकर्षण बढ्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहला। व्यापारी आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्षम हुनेछ।
कार्यभारको कारण सफलता मिल्नेछ । परिवारको सदस्यसँग प्रेमपूर्ण रहनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। कार्यस्थलमा सहकर्मी सहयोग रहनेछ। घरमा हर्ष र उत्साहको वातावरण रहनेछ।
तपाई भित्र रहेको रचनात्मकतालाई प्रोत्साहन दिन साहित्यको क्षेत्रमा लेखन तथा पठनको कार्यमा गहिरो रुचि लिनेछ। हृदयको कोमलताले प्रियजनसँग निकट रहनुहुनेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिले दिन मध्यम रहनेछ। मानसिक सन्तुलन र बोलीमा ध्यान दिनुहोला।
Previous बाहुनसंग बिहे गरेर दुख पाएँ, अब चै कम उमेरको द’लितसँग गर्छु: मिना ढकाल
Next बाटोमा खाल्डा देखेपछि आक्रोशित सिडिओले भने- पक्राउ पुर्जी जारी गर्छु